Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0912 tal
Talata 27 Nov.
Sarotra ny mahazo an-tsaina ny fahoriana tsy maintsy nitranga tao am-pon’i Jesôsy rehefa nahita ny fialonana sy ny adilahy teo amin’ny mpianany mikasika izay ho lehibe indrindra any amin’ny fanjakany. Efa antomotra anefa tamin’izay ny fotoana hiatrehany ny Hazo fijaliana, izay zava-mahamenatra dia mahamenatra indrindra.
Vakio ny Lio. 22:24-27 (jereo koa ny Mat. 18:1; 20:21). Inona ny fahamarinana lehibe tsy mbola nianaran’ny mpianatra?
Efa simba sy lomoron’ny ota loatra ny tontolo misy antsika ka mitsimbadika avokoa ny zavatra rehetra, na dia toa “ara-dalàna” aza ny fahitana izany fitsimbadihana izany. Iza re ao an-tsainy ao no hisafidy ny hanompo fa tsy ny hotompoina e? Tsy zavatra katsahina fatratra eo amin’ny fiainana ve ny handroso, ny hanan-karena ary ny hotompotompoina toy izay ny hanompo? Tsy mahagaga àry raha nanasa ny tongotry ny mpianatra i Jesôsy tamin’ny fotoana farany niarahan’izy ireo nihinana. Tsy nisy teny izay nolazainy ka afaka nampita tamin’ny fomba mahery vaika kokoa ny fahamarinana mikasika ny tena fahalehibiazana marina eo imason’Andriamanitra mihoatra noho ny fanasany ny tongotr’ireo izay tokony ho nanoroka ny tongony.
Inona no ampianarin’ny Jao. 13:1-17 antsika mikasika ny fanasan-tongotra amin’ny maha-tafiditra azy ao amin’ny fanompoam-pivavahana fandraisana ny fanasan’ny Tompo azy?
Misy fahamarinana tena mahatalanjona tokoa hita ao anatin’ireo andininy ireo. Voalaza ao amin’ny andininy 3 ny fahafantaran’i Jesôsy fa nomen’ny Rainy “ny zavatra rehetra ho eo an-tanany”. Inona indray ny mitranga manaraka? Fantatr’i Jesôsy tsara fa “Andriamanitra no nihaviany, sady Andriamanitra koa no niverenany”, kanefa dia nitsangana niala teo am-pihinanana Izy ary nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra (and. 4). Na dia tsy fantatr’izy ireo amin’ny fahafenoany aza ny maha-Izy marina an’i Jesôsy, dia azo antoka fa talanjona izy ireo. Nahoana àry no tsy voarain’izy ireo ny lesona tokony ho azony teto?
Saintsaino tsara ihany koa ny hevitry ny nanaovana ny fanasan-tongotra hialoha ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Mialoha ny hitakiantsika izay rehetra efa nataon’i Kristy ho antsika àry, tsy zavatra tena ilaina ve ny tonga amin’ny Fanasan’ny Tompo miaraka amin’ny fanetren-tena sy ny fahatsoram-po ary ny fianteherana amin’ny fahasoavan’Andriamanitra?
Tongotr’iza no mety hitondra soa ara-panahy ho anao ny manasa azy?